Date My Pet » Ratsy tarehy fahamarinana About Modern Dating
Ratsy tarehy fahamarinana About Modern Dating
Last nohavaozina: Jan. 13 2021 | 2 min namaky
Fa ndao hatrehina izany, dia tsy miaina ao amin'ny tsara Ol’ days where love, at first sight, turned into a courtship which led to a happy, ela ny fanambadiana. Noho ny ara ny teknolojia, tahotra ny fanoloran-tena, ary ny fanitsakitsaham-bady tahan'ny avo, maoderina fiarahana Tsy mora. Ary ho an'ireo teraka tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-20, isika, indrindra fa fantatr'izy ireo hoe ahoana no mety ho sarotra mampiaraka.
Ny olona izay miahy kely manana ny hery rehetra ananan'ny eo amin'ny fifandraisana ary tsy misy olona te-ho ilay izay manana tombontsoa bebe kokoa noho izay fotsiny marefo loatra. Satria tsy te-hiseho maika, Matetika isika handray ora na andro indraindray sms indray. Ireo lalao ara-tsaina dia tsy mahafinaritra ny olona.
Antso an-tariby iray efa ho faty dia endrika zava-kanto. Mitranga amin'izao fotoana izao indrindra ny fifandraisana amin'ny alalan'ny hafatra an-tsoratra, izay, raha ny marina fotsiny indrindra endrika fifandraisana.
Planning ahead and setting dates tend to never happen. Haino aman-jery noho ny sosialy, tantaram-pitiavana hafa mahaliana, sy ny namany, daty miezaka ny maimaika fotsiny kokoa ny fotoana noho ny mandefa saina lalina nomanina avy.
Andian-teny toy ny “aoka ny vatany” ary “te-mandehandeha” is code for “aoka ny hahazatra ny”. Ary raha mbola tahotra indrindra mahazo ireo hafatra, izy ireo matetika ny fomba malaza indrindra mba hanasa olona ny mandany fotoana izao andro izao.
Ny olona sasany dia tsy mitady fifandraisana, fotsiny izy ireo te hahazatra ny. Indrisy anefa fa, ny ankamaroan 'ny fotoana fa tsy hoe ny zava-misy raha tsy taorian'ny. Ankehitriny, amim-pahatsorana dia tena zara raha ampiasaina.
Olona maro no matahotra ny fanoloran-tena izay mitondra ho “isika dia ny firesahana” fifandraisana. Tsy vitan'ny hoe ity andalana blur, but these relationships also tend to never last. Marika-maimaim-poana ireo fifandraisana matetika mifarana amin'ny olona iray fangalana fa satria ny fifandraisana dia tsy ofisialy dia ny fangalana “tsy tena nitranga”.
Haino aman-jery ara-tsosialy dia feno fakam-panahy sy ny fahafahana halehany. Private hafatra sy saro-takarina toy ny filalaovana fitia tia avy hatrany an'ireo ny sary azo antoka fa mampitombo ny vintana ho fangalana. Haino aman-jery sosialy ihany koa ny mampiseho safidy mba hahita iza koa no avy any, dia tsy misy intsony fotsiny fomba hifandray amin'ireny fianakaviany sy ny namany. Social Media dia ampiasaina koa mba haneho ny fihetseham-po. Status fanavaozam-baovao, ary nandefa sary momba ny fitiavana, raha tsy niresaka momba anao mivantana, no hanehoako ny fomba vaovao ireo’ tena fihetseham-po.
Indrisy anefa fa, amin'izao fotoana izao dia tena sarotra ny mahita ny hafa tanteraka unfiltered. Ankapobeny, ny olona dia matahotra ny ho tena sy ny tenany avy tao na dia amin'ny fifandraisana. Izany hevitra ny ho natahotra dia satria tsy te-ho hita taratra ho azo loatra, koa manahy, koa dorky, tsara loatra, soa aman-tsara loatra, Tsy mampihomehy ampy, sns. Ny zavatra rehetra dia mila mahafantatra fa rehefa mba hahita ny olona, dia manaiky izy ireo lafiny rehetra amin'ny aminareo.
Farany, any person that you get romantic with will either end up being your life partner or eventually, you will break up – roa ireo zava-misy ireo nampahatahotra. Raha mampiaraka ankehitriny dia tsy mora indrindra, tsy hanenenana izany amin'ny farany. Fa rehefa manao mahita izany olona manokana, dia mazàna ny hankamamy bebe kokoa azy ireo ny rehetra ho ny dia amin 'ny fitadiavana ny tena fitiavana dia very maina foana izany.
Ahoana no mamantatra ny zavatra Fake Online Dating Profile?
Inona no hatao amin'ny Voalohany A Date By Zodiaka Sign
Ny Fomba Hanatonana vehivavy raha saro-kenatra ianao?